Izici zengqondo zentsha
Izici zengqondo zengane zihlukile kulabo okuchazwe kubantwana nakubantu abadala. Ngezindlela eziningi, lokhu kubangelwa ukuthi ekukhuleni, hhayi ekucabangeni okucabangelayo okuphumelelayo, njengabantwana, kodwa ukucabanga okungabonakali kukhula ngokwengeziwe. Osemusha uzama ukucabanga kabanzi ngokuzimela, ngenkuthalo, ngobuciko. Intsha entsha, kanye nezingane, zithokozisa kakhulu, ukuzijabulisa kwangaphandle. Ukukhula kwasekukhuleni kubonakala ngokucabanga okuzimele, okungukuthi, inqubo yokucabanga ngokwayo inesithakazelo.
Kubantu abasha, lezi zici ezilandelayo ziyizici: isifiso sokuqashelwa, ingqondo efuna ukukhathazeka, izinto eziningi ezithakazelisayo, ngokuvamile ezihamba phambili, ukungabi nesistimu kolwazi olutholile. Ngokujwayelekile ingane yakhe izama ukuqondisa izimfanelo zakhe ezingqondweni emkhakheni womsebenzi omthandayo kakhulu. Lokhu kubaluleke kakhulu ekuhloleni amakhono engqondo ezintsha ezinzima . Ngokuvamile izinga lobuhlakani liphansi kunezinga elivamile, kodwa lapho uxazulula izinkinga ezingokoqobo ezivela empilweni futhi ube phakathi kwalabo ontanga, bangabonisa ukuhlakanipha kanye ne-savvy ehlukile. Ngakho-ke, ukuhlola ukuhlakanipha kwengane esenzima, esekelwe kuphela ezinkomba ezijwayelekile, kuvame ukuphutha uma kunikezwa ngaphandle kokucabangela izithakazelo zakhe kanye nesimo sokuphila. Ekukhuleni okubonakala ngokungafani ngokomzwelo, ukuguquguquka kwemizwelo ebukhali, ukuguquka okusheshayo kusuka ekuphakanyisweni kuya esimweni sokucindezela. Ukusabela okuhlukumezayo kwethonya, okuvela ngokuphambene nalokho okushiwo mayelana nokushiyeka kokubukeka noma nomzamo wokucabanga wokunciphisa ukuzimela, kungabonakala sengathi abantu abadala abakwanele.
Kwavezwa ukuthi ukungazinzi ngokomzwelo emantombazaneni kuwela iminyaka engu-13-15, kanti abafana - iminyaka engu-11-13. Ukukhula kwasekukhuleni kunomthelela ngokwengeziwe, ukusabela ngokomzwelo kuyahluka kakhulu. Izikhathi ezivame ukuhlukumezeka ngezidakamizwa zishintshwa ngokushesha ngokuthula kwangaphandle, isimo sengqondo esibucayi kukho konke okuzungezile. Izinsana zithandana nokuzibonela, ukuzindla, okuyinto evame ukuthuthukisa ukuthuthukiswa kwezimo ezicindezelayo. Ekukhuleni, izimfanelo ze-psyche zibonakala. Ngakho-ke, ukuphikelela nokuzinza kungahlanganiswa nokungazinzi nokuziphendulela, nokuzithemba nokuzibheka kwamanye amazwe kunoma yiziphi izahlulelo kungahambisana nokuziphendulela nokwehluleka kalula. Ezinye izibonelo zi-swagger kanye namahloni, izidingo zokuxhumana kanye nesifiso sokuthatha umhlalaphansi, ukuthanda ubudlelwano kanye nokwahlulela okunomile, imizwa ejulile nokukhathazeka, ububele obuqotho nokukhathazeka, uthando nokuzonda, ukuhlukumeza, ukuhlukana.
Inkinga yokwakheka komuntu kubantwana iyinkimbinkimbi kakhulu futhi ingasetshenziswanga okungenani eminyakeni yobudala be-psychology. Kuyaziwa ukuthi isikhathi sokushintsha kusukela ebuntwaneni kuya ekubeni ngumuntu omdala kunzima kakhulu uma izidingo ezibekiwe emphakathini kumuntu omdala kanye nengane zibonakala kangcono. Isibonelo, kumazwe asathuthukiswa kabi ngokwezomnotho, umehluko ekudingeni awukho omkhulu kangangokuba wenza ushintsho kusukela ebuntwaneni kuya ekuvuthweni olubushelelezi, olungabonakaliyo, olungenabuhlungu. Kodwa isimo esibhekene naso siyabonakala emazweni amaningi athuthukile, lapho izidingo zokuvame ukuziphatha kwezingane nabantu abadala azigcini nje, kepha kunalokho ziphikisana. Ebuntwaneni, isibonelo, ukulalela okukhulu nokuntuleka kwamalungelo kuyadingeka, kanti kusukela kumuntu omdala ukukhululeka nokuzimela kulindeleke. Isibonelo esivamile ukuthi ingane ivikelwe zonke izindlela ezivela kuzo zonke izinto ezihlobene nocansi. Futhi lapho esekhulile, ngokuphambene, ubulili budlala indima ebalulekile.
Kusukela ngenhla, kungaphetha ngokuthi ukucabanga kwengqondo yobudala, kanye nomlando, imiphakathi, ukuhlukahluka kwamasiko emphakathini lapho umntwana ekhula khona futhi ubuntu buqala ukwakha, kufanele futhi ucabangele ukuhlukahluka kwengqondo, ukuhlukahluka komuntu ngamunye kanye nobulili bomuntu osemusha.
Iyini isipho sokwenza umfana oneminyaka engu-8 ubudala?
Ukusiza ingane yengane yesikhashana
Ukubhoboza i-pigtails i-athikili + ividiyo
Izipho zikaNcibijane ezithokozelayo
Siyakuhalalisela ngosuku lweMithi - izinkondlo, i-prose, i-SMS. Ukuhalalisela kwangempela nokuhlekisa ngeHholide lezisebenzi zezokwelapha
Ama-muffins ane-peaches kanye ne-icing eluhlaza
Amasiko omndeni omuhle
Ungasusa kanjani umona?
Isilinganiso sabesifazane ukuya emshadweni womphakathi
Ingabe uLududmila Putin washada okwesibili? Imininingwane yokuphila komuntu wesifazane wokuqala wangaphambili
Indlela yokubhekana ne-migraines, ubuhlungu be-acne nesisu: ukucindezeleka kokucindezeleka
Ulimi oluvuthayo: izimbangela, izimpawu, ukwelashwa
Kukuphi izwe okuthenga kakhulu
Ikhekhe ne-yoghurt e-orange kanye nama-apula abhaka
I-Gypsy fortune-telling ebalazweni: ukubaluleka kwamakhadi, ukuqagela i-gypsy ekudlala amakhadi
Izindlela ezinhle kakhulu zokuqeda ikhanda